I-iPhone 8 iya kubetha irekhodi lokuthengisa le-iPhone 6 | IPhone iindaba
I-iPhone 8 iyakwaphula irekhodi lokuthengisa kwe-iPhone 6
Ukulindelwa kwe-iPhone 8 kuphezulu kakhulu. Isikhumbuzo seminyaka elishumi i-iPhone (kunyaka olandelayo izakuba yiminyaka elishumi ukusungulwa kwe-iPhone yokuqala) izakuba nexesha elinzima kakhulu lokuba ungaphoxeki ngayo yonke into ethethwa ngayo. Kwaye asikaqali kwa-2017 okwangoku. Njengokuba oko kwakunganelanga, ngoku ulwazi luqinisekisa ukuba i-iPhone 8 iyakubetha irekhodi lokuthengisa elisezandleni ze-iPhone 6, malunga neeyunithi ezingama-150 ezigidi ezithengisiweyo kunyaka olandelayo, engeyonto imbi xa ucinga ukuba kulindeleke ukuba ithengiswe ngoSeptemba. Ezinye izinto ezinje ngokutshaja ngaphandle kwamacingo ziya kuba ziinkwenkwezi, kwaye ngokuchaseneyo noko kwathethwa ekuqaleni, kubonakala ngathi izakubakho kuzo zonke iimodeli, hayi ngaphezulu kwoluhlu kuphela.
Kuyatshiwo ukuba kuya kubakho iimodeli ezintathu zika-2017, ezimbini zazo ziya kulingana ne-iPhone 7 yangoku kunye ne-7 Plus, enobukhulu obufanayo bescreen kunye nobukhulu obufanayo kodwa ngezinto ezintsha, ezinje ngeglasi umva kunye ne-chassis yentsimbi . Enye imodeli iya kuba intsha ngokupheleleyo, inesikrini se-AMOLED kwaye sigobile, kwaye ngokutsho kwamarhe kunokuba isilela kwizakhelo, njengoko kubonakala ngathi imfashini ngoku inyanzela. Le iPhone 8 AMOLED iya kuba yeyona modeli ibiza kakhulu, kwaye iya kuba nemisebenzi ekhethekileyo, kodwa ukutshaja ngaphandle kwamacingo akuyi kuba yenye yazo, kuba zontathu iimodeli ziya kuba njalo. Into esingayaziyo kukuba itshaja engenazingcingo izakufakwa ebhokisini okanye hayi, okanye ukuba iyakufakwa kuzo zonke iimodeli. I-Apple inokuya kwintambo yokutshaja eqhelekileyo ngezixhobo "ezingabizi kakhulu" kwaye igcine itshaja ye-iPhone "ephezulu".
Kukwathethwa okuninzi malunga nobungakanani bekhusi le-iPhone 8 AMOLED. Ukuchitha isakhelo kunokukuvumela ukuba wandise ubungakanani bescreen kwii-intshi ezi-5,8, kodwa kusenokwenzeka ukuba ngemiphetho egosogoso umphezulu wokuchukumisa mncinci, ungagqithi kwii-intshi ezi-5,2. Nokuba kunjani, kuya kuba nzima kakhulu ukufikelela kwiiyunithi ezingama-150 ezigidi, kuthathelwa ingqalelo ukuba i-iPhone 6 ithengise i-120 yezigidi ngelo xesha kwaye ithathela ingqalelo ukuba azikho kangako iimarike ezintsha zokukhulisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » I-iPhone 8 iyakwaphula irekhodi lokuthengisa kwe-iPhone 6
Iindaba ngokwazo ziyamangalisa, abantu bajonge ukonga ukuthenga i-iPhone 7 kwaye aba baphononongi bexesha elizayo bathi i-iPhone 8 iya kuthengisa ngaphezulu kwe-6, ndibone izinto ezingekhoyo. Kunyaka ophelileyo ndathenga i-iPhone 1s kunye ne-900gb ye-6 euros kwaye andikhange ndithathe i-64% yento endinokuyifumana iselfowuni. Andiyikholwa. ukuthengwa kakhulu, kunyaka ophelileyo ndaphakama. Banokufumana i-20 kwi-1s kwi-7 kwi-7s engakhathaliyo. ezi Apple minyaka le zifuna ukuba sichithe i-8 euro kwiselfowuni. Andisabanjwa, kwaye bendine-8 ye-1000gs i-3 eye-3 ye-4 kunye ne-5 yokujonga iiakhawunti endizakube ndichithe malunga ne-5 yeerandi kwiibhokisi zeapile. siyaphambana okanye sithini?
I-shit yonyaka ... ukuba bakhupha iimodeli ezi-3 kwaye enye yazo ine-amoled kwaye egobile, abanye bazoyitya neetapile, ngaphandle kwalonto abayi kuba nayo isitokhwe kude kube kwiinyanga ezi-3 ezizayo njengoko kusenzeka imodeli yejetblack kwaye ngumbala lowo ... ngamafutshane ndiyathemba kwaye ndinqwenela ukuba bangakwenzi okungaqhelekanga
UMarcos Cuesta, awuyiyo eyona nto ifanelekileyo kwizifundo kubathengi kwaye usithi abazukuthengisa into abanayo engqondweni. Ngokoluvo lwam, ababaninzi abantu abathenga ii-mobiles "kwi-pace yakho", nangona kunjalo baninzi abanye abantu abangenayo imodeli ye-Apple yamva nje kwaye silinde ukuthenga i-8.
Kwimeko yam ndicace gca ukuba ndiza kuba nayo i-iPhone 8. Kude kube ngoku ndine-3G kwaye okwangoku zii-4… .. ndilinde abantu abalangazelela i-8 !!!
Ndiyakholelwa ekubeni wonke umntu uya kuyazi indlela ayisebenzisa ngayo imali yakhe. Kodwa inyani kukuba ndiyagula kukuba babeka isandla sabo epokothweni. Ndisebenzise izixhobo ezingaphezulu kweminyaka engama-20, kodwa xa uhlawula imali eninzi ngesixhobo (ndihlala eCanada kwaye apha kuya kufuneka wongeze irhafu kumaxabiso asele ephezulu), ubuncinci ndingathanda ukuba iApple ihloniphe Utyalomali kwaye ungaphelelwa liqela abantu ababeke imali eninzi kulo.
Ngoku basandula ukubhengeza ukuba bazokuphelelwa ziiMacBooks ukusukela ngo-2011, umzekelo. Ngoba? Kwaye abantu abahlawule i-2000 yeedola kwenye yezi khompyuter kwaye bayisebenzisa kuba isebenza kakuhle, kufanelekile ukuba bathenge enye entsha?
Unelungelo lokuba ngumlandeli weMac okanye nantoni na oyifunayo. Bendinjalo, kodwa ndiqala ukudinwa kukusetyenziswa gwenxa kwale brand.
Ndithenge i-iPhone yokuqala ngo-Okthobha u-2007 kwaye ndiceba ukuthenga i-iPhone ka-2017, ngokuqinisekileyo.
I-YouTube ye-iOS ihlaziywa isikhumbuza ukuba zeziphi iividiyo esizibonileyo
Ukukhutshwa kukaGoogle iiFoto eziKhethiweyo zeScreen zeMac